प्रदिपको एक्लो स्टारडम माथि मल्टिस्टार ‘रामकहानी’कति हाबी ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsप्रदिपको एक्लो स्टारडम माथि मल्टिस्टार ‘रामकहानी’कति हाबी ?
प्रदिपको एक्लो स्टारडम माथि मल्टिस्टार ‘रामकहानी’कति हाबी ?
September 1, 2018 sutraentertainment Feature News, Kollywood, News 0
सुत्रइन्टरटेन्मेन्टः–भाद्र २२ गतेबाट देशब्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘रामकहानी’ यतिबेला नेपाली सिने उद्योगमा निकै चर्चा–परिचर्चा र प्रतिक्षित फिल्म बनेको छ । भने सिनेमा जगतमा यो फिल्म निकै अब्बल ठहरिने तथा सफल निर्देशक सुदर्षन थापा निर्देशित फिल्मको प्रचार–प्रचार शैलीलाई पनि अहिले धेरैले रुचाएका छन् । निर्माण टिमले राजधानीका रेष्टुरेण्टहरुमा वाइफाईको पासवर्ड ‘रामकहानी’ राख्नेदेखि ‘रामकहानी’को सिग्नेचर अभियानसम्म चलाएको थियो । फिल्मले अपनाएको यस्तो प्रचार–प्रचारको शैलिलाई कतिपयले ‘फण्डा’ भनेर आरोप समेत लगाएका छन् । भने निर्देशक थापा उक्त कुरामा सहमत देखिदैनन् ।
फिल्मको प्रचार शैलीलाई फण्डा भन्नेहरुलाई निर्देशक थापाले उल्टै प्रश्न गरेका छन् , ‘फिल्म प्रदर्शनको तयारी अवस्था रहेको छ, के हामी विस्तारामा सुतौ ?’ फिल्मको प्रचार शैलीलाई आफूहरुले नयाँ तरिकाले गर्दा धेरै मानिसहरुलाई मन परेको उनको भनाइ रहेको छ । निर्देशक थापाले फिल्म पूर्णतया लवस्टोरी मात्रै नभएर लवस्टोरी, थ्रिलर तथा कमेडी जनरामा निर्माण भएको समेत् बताएका छन् । साथै यो फिल्म हेर्ने दर्शकले फिल्म सुरु भए देखि फिल्मको अन्त्य सम्म फिल्म हेर्ने दर्शकले पूर्णतया मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने समेत् निर्देशक थापाले प्रष्ट पारेका छन् । यो फिल्म निर्माण घोषणा भएदेखि नै प्रतिक्षित बनेकोमा केही समय पहिले सार्वजनिक भएका गीत संगीत तथा ट्रेलरको कारण झनै यसको हाइप चुलिदो छ ।
निर्देशक थापाले यसअघि निर्देशन गरेका फिल्म ‘प्रेमगीत’, ‘मेरो एउटा साथी छ’ तथा ‘म यस्तो गीत गाउछु’ दर्शकले अत्यन्तै रुचाएको फिल्म अन्तरगत पर्दछन । निर्देशक थापा फिल्म ‘रामकहानी’ पहिलेका फिल्म भन्दा पनि अझै हाइप निर्माण गर्न सफल हुनेमा विस्वस्त रहेका छन् । उनले ‘रामकहानी’ यसअघि निर्माण भएका फिल्म भन्दा पनि फरक र दर्शकले मन पराउने खालको भएकोमा जोड दिएका छन् । कतिपयले रामकहानीमा नयाँ चिज छ भनेर प्रचार मात्रै गरिएको भन्ने आरोप लगाएका छन् नि भनेर निर्देशक थापालाई जिज्ञाशा राख्दा उनले आफूले पहिलो पटक यस्तो सुनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निर्देशक थापाले नायिका पूजा शर्मासँग मिलेर निर्माण गरेको यो फिल्ममा नायक आकाश श्रेष्ठ नायिका पूजा शर्माको कोएक्टरको भूमिकामा छन् ।
आकाश श्रेष्ठको ‘स्टारडम’ले फिल्म चल्छ त ? भनेर निर्देशक थापालाई प्रश्न गर्दा उनले नेपालमा कोही पनि स्टार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले फिल्म स्टार चल्ने भन्दा पनि कन्टेन्ट र टिमले चल्ने प्रतिक्रिया दिए । निर्देशक थापाले फिल्ममा आफूहरुले दर्शकका लागि मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कुरा पस्किएको तथा फिल्मका मुख्य कलाकार पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई तथा रविन्द्र झा लगायतले निकै राम्रो मिहिनेत गरेकाले फिल्म चल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । भने निर्देशक थापाले त्यति मात्रै भनेनन् यसअघि आफूले निर्देशन गरेका फिल्महरु भन्दा ‘रामकहानी’ राम्रो चल्ने र अझै हाइप लिने ठोकुवा समेत गरेका छन् ।
हुन पनि फिल्म ‘रामकहानी’ को निर्माण सुरु भएदेखि आजसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो निकै प्रतिक्षित फिल्मको कोटीमा पर्न सफल भएको छ । लभस्टोरी फिल्म बनाउन माहिर मानिएका निर्देशक थापाले कमेडी र थ्रिलरलाई पनि समेट्दा फिल्ममा अझै प्लस प्वाइन्ट हुने कतिपयले विश्वास समेत गरेका छन् । यो फिल्मको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाँस्य कलाकारको बाहुल्यता पनि हो । नेपालमा हाँस्यकलाकारिता क्षेत्रमा राम्रो छाप छोड्न सफल कलाकारहरुको बोलवाला रहेको फिल्मले सफल्ता हात पार्नेमा कुनै दुईमत देखिदैन । एकातिर यति प्रतिक्षित फिल्म भदौ २२ मा प्रदर्शन हुनै लाग्दा निर्माण सुरु भएदेखि नै विवादको दलदलमा फस्दै आएको फिल्म ‘रोज’ पनि त्यहि दिनदेखि प्रदर्शनमा आउदैछ ।
प्रदिप खड्का स्टारर फिल्म ‘रोज’ निर्माण सुरु हुँदा ‘रोजी’ नामबाट भयो भने अहिले आएर ‘रोज’ मा परिवर्तन भएको छ । रोजी महर्जनको हत्यासँग जोडिएर फिल्म निर्माण गरिएको भन्दै रोजीका परिवारले फिल्म निर्माण टिमसँग आपत्ति जनाएपछि निर्माण टिम र रोजीको परिवारको विवाद चलचित्र विकास बोर्डसम्मै पुगेको थियो । रोजीको परिवारको आपत्तिपछि फिल्मको नाम परिवर्तन गरेको निर्देशक नीरक पौडेलले स्वीकार पनि गरिसकेका छन् ।
तर, उनले फिल्मको कथा भने पुरानै रहेको बताउने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन यो फिल्ममाथि स्कृप्ट चोरीको समेत आरोप लागेको छ । अर्को कुरा भनेको फिल्ममा महिला हिंसालाई अलि बढी प्रसय दिँदा पछिल्लो समय नेपालमा बढेका महिलामाथिको बलात्कार तथा हत्या हिंसालाई अझै बढी ‘इनकरेज’ गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि फिल्म ‘रामकहानी’ तथा ‘रोज’ को भिडन्त कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हेर्न त अझै केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । तर, फिल्म ‘रामकहानी’ मल्टिस्टारले भरिपूर्ण फिल्म हो भने ‘रोज’ मुख्यतया प्रदिप खड्काको स्टाररमा भर परेको फिल्म हो । विगतका नजिरलाई हेर्ने हो भने नायिका पूजा शर्माले ‘ शंखे चंखे पंखे’ जस्तो मध्यम चलेको फिल्म, ‘प्रेमगीत’ र ‘म यस्तो गीत गाउछु’ जस्ता सफल फिल्म दिन सफल भएकी थिईन् । त्यस्तै, माग्नेबुढा, जितु नेपाल ‘छक्कापञ्जा’ का ब्राण्ड नै मानिन्छन् ।
रविन्द्र झा तथा विल्सन विक्रम राई पनि आफ्नो स्टार विकाउन सफल कलाकारका रुपमा परिचित कलाकार हुन् । तर, अर्कोतर्फ ‘स्केप’ जस्तो सुपरफलप फिल्मबाट पार नलाग्ने देखिपछि अष्ट्रेलिया भासिने सुरमा रहेका प्रदिपलाई प्रेमगीतले सफलता दिलाएपछि अहिले उनी त्यही स्टारडमलाई सिनेमा उद्योगमा सो गरिरहेका छन् । उनको त्यही स्टारडमलाई रोजको निर्माण टिमले मल्टिस्टारको स्टारडमसँग भिडाउन खोज्नु अवस्य पनि सानो चुनौती भने पक्कै होइन । प्रदिप एक्लैको काँधमा ‘रोज’ ले थेग्ला त मल्टिस्टार ‘रामकहानी’ को चुनौती ?